Voamarina: Tsy hisy Xiaomi Mi 7, ny Mi 8 ihany no halefa | Androidsis
Ny hetsika izay nokarakarain'i Xiaomi ho an'ny 31 Mey dia mbola manome kabary betsaka. Amin'ity hetsika ity, ny marika sinoa dia hanolotra ny zava-baovao farany. Anisan'ireny no ahitantsika ny MIUI 10, ny Xiaomi Mi 8 ary angamba ny Mi Band 3. Ka mampanantena izany fa hetsika iray mahaliana. Mpampiasa maro no manontany tena raha ho tonga amin'ity hetsika ity ihany koa ny Xiaomi Mi 7. Toa tsia.
Ary ny antony tsy hanolorana azy dia satria tsy misy ary tsy hisy Xiaomi Mi 7. Tsy misy ny telefaona. Ny marika sinoa dia nanamafy tamin'ny tambajotra sosialy Weibo fa tsy misy ilay fitaovana. Saingy mandeha mivantana amin'ilay maodely vaovao izy ireo, ny Xiaomi Mi 8.
Tonga ny modely vaovao ho fahatsiarovana ny tsingerintaona fahavalo an'ny mpanamboatra sinoa eny an-tsena. Satria, maro no nihevitra fa fanombohana mitovy amin'ny iPhone X io. Misy telefaona manokana natomboka, ho fanampin'ny avo lenta izay antenainay. Saingy amin'ity tranga ity dia tsy ho izany.
Satria tsy hanana Xiaomi Mi 7 izahay. Nanazava fohifohy ny marika ny antony mahatonga azy ireo mandingana ity nomenclature ity. Raha ny fahitàna azy ireo, raha ny fanehoan-kevitr'izy ireo, tena tsara ny fitsambikinana kalitao, hany ka tsy hitsara ny telefaona ny fitsambikinana iray an'ny taranaka iray.
Fanambarana vitsivitsy izay izahay Manoro hevitra izy ireo avy eo fa ny avo lenta vaovao dia ho amin'ny sehatra mahavariana. Farafaharatsiny mahita izay lazain'ny orinasa. Na dia azo antoka aza fa mpampiasa maro no malahelo amin'ilay hevitra hoe tsy hisy Xiaomi Mi 7, ary manana ambaratonga vaovao vaovao ihany isika amin'ity hetsika ity.
Amin'izao fotoana izao io no nolazain'ny marika momba ny Xiaomi Mi 7 ary ny antony tsy hahitantsika ny Xiaomi Mi 8 amin'ity hetsika ity amin'ny herinandro ambony. Betsaka ny zavatra mety horesahina rehefa mandeha ny andro. Fa hatreto dia ny fampahalalana rehetra no misy. Ahoana ny hevitrao momba izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Xiaomi dia manamafy fa tsy hisy Xiaomi Mi 7